warkii.com » Qeylo dhaanta reer Galbeedka iyo sidey uga falceliyeen in Aya Sophia dib Masjid looga dhigay.
Qeylo dhaanta reer Galbeedka iyo sidey uga falceliyeen in Aya Sophia dib Masjid looga dhigay.
Dalalka reer Galbeedka ayaa siweyn uga horyimid go’aankii Maxkamada Sare ee Turkiga shalay oo jimce kasoo baxay kaasoo Aya Sophia markale dib looga dhigaayo Masjid waxaana kamid ah dalalka sida adag uga hor yimid go’aankaas Ruushka, Greeca, Romania iyo Mareykanka,
Hogaamiyaha Kaniisada Orthodox ee Ruushka taasoo ay taabacsanyihiin in kabadan 300 Million qof ayaa sheegay in go’aanka Turkiga uu kala fogeynaayo dadka ku kala dhaqan Bari iyo Galbeed wuxuuna intaas ku daray iney tahay waxaan la aqbali karin in masaajid loo badalo.
Romania ayaa dhankeeda sheegtay in go’aanka Turkiga uu sii kala fogeynaayo dadka diimaha kala duwan ku dhaqmaan misna ku sugan mandaqada ayagoona ugu baaqay Turkey iney ka fiirsadaan Go’aankaas.
Greece oo dhankiisa khilaaf xoogan kala dhaxeeyo turkiga ayaa sheegay in go’aanka maxkamada uu kicinaayo xasarad ayagoona sidoo kale ku eedeeyay in Qowmiyada uu kasoo jeedo Erdogan ay doonayaan iney Turkiga dib ugu celiyaan 600 sano kahor siduu ahaa.
Sidoo kale go’aanka Turkiga waxaa ka hadlay dalal badan oo ay kamid yihiin Mareykanka, Masar iyo Qaramada Midoobe kuwaasoo dhammaantooda kahor yimid in Aya Sophia markale Masjid loo badalo.